काशिगाउँको किबीको बजार व्यवस्था गर | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
काशिगाउँको किबीको बजार व्यवस्था गर
Published On : १० मंसिर २०७७, बुधबार १६:०४
गोरखाको काशिगाउँमा किबी खेती गर्न सुरु गरिएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक प्रयोगका रुपमा गरिएको किबी खेती गोरखाको धार्चे गाउँपालिका वडा नं. ६ काशिगाउँमा गरिएको हो ।
यहाँ गाउँपालिका र फेज नेपाल नामक गैरसरकारी सँस्थाको सहकार्यमा किबी खेती गरिएको हो ।
किवीमा भिटामिन सी प्रसस्त पाइन्छ । त्यसैले कोरोना भाइरस लगायतका बिभिन्न रोगबाट बच्न एण्टिबडी निर्माणमा यो फलले सहयोग गर्छ ।
कतिपय फलफूल स्याउँ जस्तो ढुवानी गर्दा जोगाउन कठिन हुन्छ तर किवी फललाई बफाएर राखेमा यो नष्ट नहुने, बोकेर आरुघाट, आर्खेत तथा सदरमुकामसम्म पुर्‍याउँदा पनि नष्ट नहुने हुँदा यसलाई बेचेर किसानले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छन् ।
त्यसैले किबी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न सके दुर्गम भेगका किसानले राम्रो आयआर्जन गर्न सक्छन् ।
अहिले फेज नेपाल नामक गैरसकारी संस्थाले प्राविधिक सहयोग गरेको छ । अभिमुखीकरण गर्ने, तालिम गर्ने, खेतीमा उत्पन्न चुनौति समाधानका लागि प्राविधिक सहयता गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक अनुदान दिएको छ । किसान स्वयंले बिक्री गर्न नसकेमा खरिद गरेर आफैले बजार व्यवस्थापन गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
किवीमैत्री हावापानी पाइने भएकाले काशिगाउँलाई किवी विशेष पकेट क्षेत्र बनाउन गाउँपालिकाले योजना बनाइरहेको जनाएको छ । गुम्दा, लाप्राकका किसानलाई आलु खेतीमा सहयोग गर्ने, काशिगाउँका किसानलाई किबीका लागि जस्तै विभिन्न बस्तीका किसानलाई बिभिन्न खेतीको पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम गरेमा त्यहाँका किसानहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
छ्यासमिसे बाली व्यवसायिक हुनसक्दैन तर ठाउँ विशेषमा विशेष खेती गरेमा त्यसलाई विकास गर्न सहज हुनसक्छ । त्यसैले पालिकाले किबीको बजार व्यवस्था गरी किसानलाई उत्साहित बनाउनु आवश्यक छ ।